Die Kukanda Sevhisi - Anebon Metal Zvigadzirwa Co., Ltd.
Inokurumidza Prototyping Service
Metal Stamping Sevhisi
Die Kukanda Sevhisi
Anebon Metal Die Kukanda
Kubva pane dhizaini yekutanga kuenda kugungano rezvigadzirwa, zvigadzirwa zveAnebon zvekugadzira zvinogona kupa vatengi ruzivo rwekumira-kamwe. Vashandi vane hunyanzvi uye vane hunyanzvi vanogadzirwa nemainjiniya uye nyanzvi dzekusimbisa mhando izvo zvinogona kugadzirisa maitiro ekugadzira akasiyana siyana kusangana nezvinodiwa zvevatengi. michina inodiwa kuti ubudise iyo, kubva pakunyungudika kusvika pakupedzisa maitiro senge machining, anodizing, kudonha, sanding, sandblasting, kupenda uye musangano）.
Kugadzirwa kweMold ndechimwe chesimba redu. Ndichiri kusimbisa dhizaini nemutengi, isu tiri kuongorora zvese zvinhu zveiyo dhizaini dhizaini kusanganisira nesimbi inoyerera muchombo, kuti ibudise zvikamu zvakaomarara zvejometri muchimiro chiri padyo nezvigadzirwa zvekupedzisira.
Chii chinonzi Die Casting?
Kufa kukanda isimbi yekukanda sisitimu inozivikanwa nekushandiswa kweforoma mhango yekushandisa kumanikidza kwakanyanya kune iyo yakaumbwa simbi. Ma Molds anowanzo kuvezwa kubva kumusoro kwesimba alloys, mamwe acho akafanana nejekiseni kuumbwa. Vazhinji vanofa vanokandirwa havana-simbi, senge zinc, mhangura, aluminium, magnesium, lead, tin, uye lead-tin alloys uye mamwe maalloys. Zvichienderana mhando kufa vachikanda, inotonhorera mukamuri kufa vachikanda muchina kana inopisa mukamuri kufa muchikanda muchina unodiwa.
Kukanda michina uye anoumba zvinodhura, saka kufa vachikanda muitiro iri kazhinji chete kushandiswa vakawanda kubereka vakawanda zvigadzirwa. Izvo zviri nyore kugadzira zvigadzirwa zvekufa, izvo zvinongoda matanho mana chete akakura, nemutengo mumwe chete wekuwedzera uri wakaderera. Kufa kukanda kunonyanya kukodzera kugadzirwa kwenhamba huru yediki uye yepakati-saizi castings, saka kufa kukanda ndiyo inonyanya kushandiswa kwakasiyana siyana kukanda maitiro. Inofananidzwa nedzimwe nzira dzekukanda, iyo yekufa-yakakanda pamusoro ndeyekunyepedzera uye ine yakadzama mativi kuenderana.
Tinoda kuita zvese zvatinogona dp kuchengetedza nharaunda. Sekambani yekugadzira, isu tine basa rakakosha rekudzivirira nharaunda kubva mukusvibiswa.
Zvakanakira Kufa Kukanda
1.Iye kugadzirwa kweanokanda kwakanyanya kwazvo, uye kune mashoma kana asina machining zvikamu.
Zvikamu zveDii-zvekukanda zvinoita kuti zvikamu zvisimbike, zvakadzikama zvine mutsindo uye zvinosimbisa mhando uye kutaridzika.
3.Die-cast zvikamu zvine simba kupfuura epurasitiki jekiseni zvakaumbwa zvikamu zvinopa zvakafanana kuenzana kunyatso.
4.Maumbirwo anoshandiswa mukufa kwekufa anogona kuburitsa zviuru zvakafanana zvekukanda mukati mezvakatemerwa kushivirira zvisati zvawedzerwa maturusi.
5.Zinc castings inogona kuve nyore kusarudzwa kana kupedzwa neyakaganhurirwa pamusoro pekurapwa.
6.The buri mugomba anofa Kudzingwa inogona cored uye akaita saizi akakodzera kuzvipira tapping drills.
7.Iyo tambo yekunze pachikamu inogona kufa nyore kukanda
8.Kufa kukanda kunogona kutevedzera magadzirirwo ekusiyana kwakasiyana uye nhanho yedudziro kakawanda.
9.Zvakawanda, kufa kukanda kunoderedza mutengo kubva kune imwechete maitiro uchienzaniswa neyakaitwa inoda matanho akati wandei ekugadzira. Inogona zvakare kuchengetedza mutengo nekuderedza marara uye zvigadzirwa.
Iyo simbi yataishandisa yekufa ichikanda kunyanya inosanganisira zinc, mhangura, aluminium, magnesium, lead, tini, uye lead-tin alloys nezvimwe. Kunyange hazvo simbi yakakandwa isingawanzo, zvinoitawo. Hunhu hwesimbi dzakasiyana-siyana panguva yekufa kwekukanda ndeinotevera:
• Zingi: Iyo simbi iri nyore kufa-yakakandwa, ine hupfumi paunenge uchigadzira zvidimbu zvidiki, zviri nyore kupfeka, yakasimba simba rekumanikidza, yakakwirira mapurasitiki, uye hupenyu hwakareba hwekurasa.
• Aluminium: Yakakwira mhando, yakaoma kugadzira uye yakatetepa-inemadziro castings ine yakadzama dimensional kudzikama, yakakwira ngura kuramba, yakanaka mechina zvivakwa, yakakwira yekupisa conductivity uye magetsi conductivity, uye yakakwira simba pakakwirira tembiricha.
• Magnesium: Yakareruka kumuchina, yakakwira simba kuhuremu reshiyo, yakareruka pane inowanzo shandiswa kufa-cast simbi.
• Mhangura: High kuomarara uye yakasimba ngura kuramba. Iyo inonyanyo shandiswa kufa-yakakandwa simbi ine yakanakisa michina zvivakwa, anti-kusimira uye simba padhuze nesimbi.
• Tungamira uye tini: Kuwanda kwepamusoro uye kukwirira kwepamusoro kweakakosha ekudzivirira ngura zvikamu. Nezvikonzero zvehutano hweveruzhinji, iyi alloy haigone kushandiswa senzvimbo yekugadzirisa chikafu uye yekuchengetedza nzvimbo. Lead-tin-bismuth alloys (dzimwe nguva zvakare iine kabhuru kadiki) inogona kushandiswa kugadzira ruoko-yakapera tsamba uye kupisa kupisa muletpresspress kudhinda.
Anebon simbi zvigadzirwa Co., LTD